【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】အသကျရှူ လမျးကွောငျးဆိုငျရာရောဂါ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကိုကာကှယျနိုငျတဲ့ ဗီတာမငျ-ဒီ | Opinion Leaders
လတျတလောအသကျရှူလမျးကွောငျး ဆိုငျရာရောဂါသညျ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံ၊ အထူးသဖွငျ့ ဝူဟနျမွို့တှငျ အဓိက ကူးစကျ ပြံ့နှံ့ခဲ့သျောလညျး ယခုအခါ အခွား နိုငျငံမြားအနဖွေငျ့ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ၊ ဂပြနျနိုငျငံနှငျ့ အီရနျနိုငျငံ စသညျ့နိုငျငံမြားအပါအဝငျ ကူးစကျပြံ့နှံ့မှုမြားပွားလာလကျြရှိပါတယျ။ ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ၌ ရောဂါကူးစကျပွနျ့ပှားမှုသညျ ပွညျသူလူထုအတှငျး၌ စတငျ ဖွဈပှားခဲ့ကာ ရောဂါကူးစကျမှုနှုနျးမွငျ့မားနသေညျ့ကာလ Ascending phase ဖွဈနသေောကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာလူမြိုးတှေ အနဖွေငျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကိုကာကှယျနိုငျတဲ့ကိုယျခန်ဓာရဲ့ ခုခံအားစနဈအတှကျ အထောကျအကူပွုပေးတဲ့ ဗီတာမငျ-ဒီ ကို သုံးစှဲသငျ့ ပါတယျ။ ဗီတာမငျ-ဒီ ဆိုတာက ခန်ဓာကိုယျအတှကျကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးဖို့လိုအပျတဲ့ ကယျဆီယမျကို စုပျယူပေးနိုငျပွီး ကိုယျခံအားလညျး ကောငျးစသေလို ဖြားနာရောငျရမျးမှုတှကေိုလညျး လြော့ခပြေးနိုငျပါတယျ။
အရိုး နဲ့ သှားကနျြးမာရေးအတှကျသာမကဘဲ ကိုယျခန်ဓာရဲ့ ခုခံအားစနဈအတှကျ အထောကျအကူပွုပေးပါတယျ။ ဗီတာမငျ-ဒီ ကို ဘယျကရသလဲ? ဗီတာမငျ-ဒီ ကို ကြှနျတျောတို့စားလိုကျတဲ့ ကွကျဥ၊ ဘဲဥစတဲ့ ဥမြိုးစုံ၊ အဆီမြားတဲ့ငါး၊ နှားနို့၊ ထောပတျတို့ကနေ ရရှိပါ တယျ။ ဒီအစားအစာထဲမှာပါတဲ့ Vitamin D ဟာ ကုနျကွမျးအဆငျ့ဖွဈတဲ့ 7–dehydrocholesterol အနနေဲ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ နရေောငျခွညျ မှာပါတဲ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျ (UV Light) ဟာ လူရဲ့အရပွေားမှတဆငျ့ သှေးကွောထဲကို ဖောကျဝငျသှားတဲ့အခါမှာ သှေးထဲမှာရှိတဲ့ အဆိုပါကုနျကွမျးကို Vitamin D ဖွဈတဲ့ Cholecalciferol အဖွဈကို ပွောငျးပေးပါတယျ။ ပွီးတော့မှ အသညျးနဲ့ကြောကျကပျတို့က အဆငျ့ဆငျ့ပွုပွငျပေးပွီး နောကျဆုံးမှ ခန်ဓာကိုယျဟာ အသုံးခနြိုငျတဲ့ ဗီတာမငျ-ဒီ အနအေထားကို ရောကျပါတယျ။ သှေးထဲမှာ Vitamin D level ဘယျလောကျရှိသငျ့သလဲ? ပုံမှနျရှိရမယျ့ Vitamin D level က 75nmol/L ပါ။ 50 - 75 nmol/L ရှိနတေဲ့သူတှဆေို Vitamin D မလုံလောကျဘူး။ 50nmol/L အောကျရောကျနပွေီဆိုရငျ အရိုးပှတာ အရိုးကြိုးလှယျတာတှေ ဖွဈနိုငျတယျ။
ဗီတာမငျ D ခြို့တဲ့ရငျ ဖွဈတတျတဲ့ လက်ခဏာတှကေတော့
1. မကွာခဏ ဖြားနာပွီး ရောဂါကူးစကျခံရ လှယျခွငျး
3. အရိုးအဆဈမြားနာကငျြခွငျး၊ ခါးကိုကျဝဒေနာခံစားရခွငျး
5. အနာကကျြ နှေးခွငျး
6. အရိုးပှ ရောဂါခံစားရလာခွငျး
9. သှေးပေါငျခြိနျ တကျခွငျး တို့ဖွဈပါတယျ။
Vitamin D ခြို့တဲ့နတောဘယျလိုသိနိုငျလဲ? သှေးစဈကွညျ့ရမယျ။ ကိုယျက Vitamin D ခြို့တဲ့နတောသခြောပွီဆိုရငျ ဆရာဝနျ ညှနျကွားခကျြ အတိုငျး ဆေးသောကျသငျ့ပါတယျ။ ဗီတာမငျ ဒီ ခြို့တဲ့သူမြားဟာ ခြို့တဲ့သော အဆငျ့ (သာမနျ၊ အလယျအလတျ၊ ပွငျးထနျ) ပျေါ မူတညျ၍ ဆေးကို လခြီ၍ သောကျသုံးရတတျပါတယျ။ ပုံမှနျလူကွီးတဈယောကျအနနေဲ့ တဈနတေ့ာ အမြားဆုံး စားသုံး သငျ့ တဲ့ ပမာဏဟာ 600 IU ထကျ မကြျောသငျ့ပါဘူး။ ယနခေ့တျေ နမေထှကျခငျ ရုံးတကျ၊ နဝေငျမှ ရုံးဆငျး၊ တဈနကေုနျ ရုံးမှာထိုငျရတဲ့ အပွငျ အခြို့နရေောငျမရတဲ့ ဒသေမှာ နရေတဲ့အခါ ဗီတာမငျ ဒီ ခြို့တဲ့မှုကို ခံစားလာရပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ပုံမှနျ နအေ့လငျးရောငျ အောကျမှာ လှုပျရှားသှားလာပွီး ကိုယျခန်ဓာရဲ့ ခုခံအားစနဈအတှကျ အထောကျအကူပွု စကော အသကျရှူ လမျးကွောငျးဆိုငျရာရောဂါ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကိုကာကှယျကွပါစို့။ ။ ကနျြးမာပြျောရှငျကွပါစေ။
လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါသည် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့် ဝူဟန်မြို့တွင် အဓိက ကူးစက် ပျံ့နှံ့ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ အခြား နိုင်ငံများအနေဖြင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အီရန်နိုင်ငံ စသည့်နိုင်ငံများအပါအဝင် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုများပြားလာလျက်ရှိပါတယ်။ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုသည် ပြည်သူလူထုအတွင်း၌ စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားနေသည့်ကာလ Ascending phase ဖြစ်နေသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ခုခံအားစနစ်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးတဲ့ ဗီတာမင်-ဒီ ကို သုံးစွဲသင့် ပါတယ်။ ဗီတာမင်-ဒီ ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ ကယ်ဆီယမ်ကို စုပ်ယူပေးနိုင်ပြီး ကိုယ်ခံအားလည်း ကောင်းစေသလို ဖျားနာရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလည်း လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အရိုး နဲ့ သွားကျန်းမာရေးအတွက်သာမကဘဲ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ခုခံအားစနစ်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။ ဗီတာမင်-ဒီ ကို ဘယ်ကရသလဲ? ဗီတာမင်-ဒီ ကို ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥစတဲ့ ဥမျိုးစုံ၊ အဆီများတဲ့ငါး၊ နွားနို့၊ ထောပတ်တို့ကနေ ရရှိပါ တယ်။ ဒီအစားအစာထဲမှာပါတဲ့ Vitamin D ဟာ ကုန်ကြမ်းအဆင့်ဖြစ်တဲ့ 7–dehydrocholesterol အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည် မှာပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV Light) ဟာ လူရဲ့အရေပြားမှတဆင့် သွေးကြောထဲကို ဖောက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ အဆိုပါကုန်ကြမ်းကို Vitamin D ဖြစ်တဲ့ Cholecalciferol အဖြစ်ကို ပြောင်းပေးပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ်တို့က အဆင့်ဆင့်ပြုပြင်ပေးပြီး နောက်ဆုံးမှ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အသုံးချနိုင်တဲ့ ဗီတာမင်-ဒီ အနေအထားကို ရောက်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ Vitamin D level ဘယ်လောက်ရှိသင့်သလဲ? ပုံမှန်ရှိရမယ့် Vitamin D level က 75nmol/L ပါ။ 50 - 75 nmol/L ရှိနေတဲ့သူတွေဆို Vitamin D မလုံလောက်ဘူး။ 50nmol/L အောက်ရောက်နေပြီဆိုရင် အရိုးပွတာ အရိုးကျိုးလွယ်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
1. မကြာခဏ ဖျားနာပြီး ရောဂါကူးစက်ခံရ လွယ်ခြင်း
3. အရိုးအဆစ်များနာကျင်ခြင်း၊ ခါးကိုက်ဝေဒနာခံစားရခြင်း
5. အနာကျက် နှေးခြင်း
6. အရိုးပွ ရောဂါခံစားရလာခြင်း
9. သွေးပေါင်ချိန် တက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Vitamin D ချို့တဲ့နေတာဘယ်လိုသိနိုင်လဲ? သွေးစစ်ကြည့်ရမယ်။ ကိုယ်က Vitamin D ချို့တဲ့နေတာသေချာပြီဆိုရင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ဆေးသောက်သင့်ပါတယ်။ ဗီတာမင် ဒီ ချို့တဲ့သူများဟာ ချို့တဲ့သော အဆင့် (သာမန်၊ အလယ်အလတ်၊ ပြင်းထန်) ပေါ် မူတည်၍ ဆေးကို လချီ၍ သောက်သုံးရတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်နေ့တာ အများဆုံး စားသုံး သင့် တဲ့ ပမာဏဟာ 600 IU ထက် မကျော်သင့်ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ် နေမထွက်ခင် ရုံးတက်၊ နေဝင်မှ ရုံးဆင်း၊ တစ်နေကုန် ရုံးမှာထိုင်ရတဲ့ အပြင် အချို့နေရောင်မရတဲ့ ဒေသမှာ နေရတဲ့အခါ ဗီတာမင် ဒီ ချို့တဲ့မှုကို ခံစားလာရပါတယ်။ဒါကြောင့် ပုံမှန် နေ့အလင်းရောင် အောက်မှာ လှုပ်ရှားသွားလာပြီး ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ခုခံအားစနစ်အတွက် အထောက်အကူပြု စေကာ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိုကာကွယ်ကြပါစို့။ ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။